Kispest - Wikipedia
Kispest (laydhka Little Pest) waa degmada 19aad ee XIX ee Budapest, Hungary. Waxay ku taala koonfur-bari ee magaalada Pest ee taariikhiga ah. Waxaa la aasaasay 1871 tuulo miyiga oo ah tuulo yar oo ku taal xadka magaalada Budapest, sidaas darteed waxaa loo yaqaan Kispest (Little Pest). Laga soo bilaabo 1880 illaa 1990kii dadweynaha Kispest ayaa kordhay min 1820 ilaa 72,838.  Kispest wuxuu noqday qayb ka mid ah Magaalooyinka Greater Budapest sannadkii 1950. Qeyb wayn oo loo yaqaan Kispesti lakótelep (Kispest microdistrict) ayaa la dhisay sannadkii 1980-meeyadii (12,100 guryo, 33,000 oo qof), taasoo ah lixda ugu wayn ee hantida maguurtada ah ee ku yaal Budapest. Degmadu waxay u adeegtaa Metro 3 (Kőbánya-Kispest iyo Hat Station), sidaas darteed xiriirka degaanka Downtown waa deg deg. Xarunta Metro ee Kispest waa seddexaad ee ugu mashquulsan magaalada (ka dib markii Deak Square iyo Örs vezér tere) ayadoo lagu qiyaasay 40,000 rakaab ah oo isticmaalaya (marar laba jeer) maalin shaqo caadi ah.
Ferenc Puskás ayaa ciyaaray kubadda cagta ee Kispest F.C. (ka dibna loo yaqaan Kispest Honvéd FC) 1950s.
Markii taangiyada Sovetka iyo ciidamada ay dib ugu soo laabteen Budapest si ay ula wareegaan kacdoonkii rayidka ee bishii Oktoobar / Bishii 1956, waxay la soo xidhiidheen bartamaha magaalada koonfur bari, ilaa Upper Avenue, iyadoo qaar ka mid ah iskudhacyadii ugu horreeyay ee ka dhacay Kispest.
Kispest waxaa ka soo jeeda degaan degan oo la yiraahdo Wekerletelep (oo lagu magacaabo dabbaaldegga Hungary kahor waqtiga horumarinta 1920-kii, Sándor Wekerle). Meelahan waxay leedahay cagaar badan. Xarunteeda dhexe waxay leedahay laba dabeecadood oo qaab dhismeed ah (oo loogu talagalay Károly Kós oo ku salaysan qaababka dhismaha Transylvanian). Bishii Maajo sannad kasta waxaa la qabtaa Wekerle Napok. Tani waxay ku lug leedahay dhacdooyin xiiso leh iyo dhacdooyin baaskiil ah oo loogu talagalay da 'kastaba, munaasabado, riwaayado, filim iyo dhacdooyin dhaqameedyo kala duwan iyo qoys.
Waxaa laga yaabaa in kaniisadda ugu fiican ee Kispest ay tahay Kaniisadda Katooliga ee Saint Mary of Assumption, oo ku yaalla dukaanka magaalada Kispest.
Gallery[wax ka badal | wax ka badal xogta]
The church of Saint Mary of the Assumption in Kispest
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kispest&oldid=203586"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Luuliyo 2020, marka ee eheed 21:45.